Qorshe hawleed lagu bilaabay in lagu ilaaliyo geeriga Tanzania
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Qorshe hawleed lagu bilaabay in lagu ilaaliyo geeriga Tanzania
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Investments • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Muddo shan sano ah Qorshaha Waxqabadka Ilaalinta Geriga ayaa hoos imanaya hirgelinta cilmi baarista iyo keydinta cawrada Tansaaniya, oo lagu bartilmaameedsanayo in laga badbaadiyo ugaarsiga iyo burburka deegaanka.
Giraffes waxaa laga helaa iyada oo si sharaf leh ugu dhex fureysa jardiinooyinka duurjoogta Bariga Afrika ee Tansaaniya, Kenya iyo Rwanda.
Qorshaha Waxqabadka Ilaalinta Giraffe ee sannadaha 2020 illaa 2024 waxaa loogu talagalay in lagu hagaajiyo aqoonta cilmiga bey'ada geeraarka, oo ay ku jiraan badnaantiisa, qaybinta, qaabka isticmaalka deegaanka, iyo dookh siinta ilaalinta iyo maaraynta wanaagsan.
Giraffe waa xayawaanka loogu qadarinta badan yahay Tansaaniya ee kujira qorshooyinka ilaalinta adag ee hada kujira qorshaha cilmibaarista iyo ilaalinta si looga badbaadiyo aafooyinka dabiiciga ah oo ay kamid yihiin badnaantiisa, baahinteeda, qaabka isticmaalka deegaanka, iyo doorbidida doorbidida ilaalinta iyo maaraynta duurjoogta. .
The Machadka Cilmi baarista Duurjoogta Tansaaniya (TAWIRI) ayaa lagu yiri bayaan uu soo saaray in Qorshe hawleedka sidoo kale diirada lagu saari doono cilmiga jir ahaaneed, cudurada iyo saameynta ay ku leeyihiin jiritaanka Geriga si loo helo daryeel iyo maareyn wanaagsan.
"Ilaalinta geeriga Tansaaniya waa mid aad muhiim u ah maadaama xayawaanku aad muhiim ugu yahay dhinacyo badan, oo ay kujirto doorkiisa astaanta u ah hidaha iyo dhaqanka Tansaaniya", TAWIRI ayaa ku tiri bayaankeeda.
"Intaa waxaa sii dheer, Geriga waa nooc muhiim u ah dhiirrigelinta dalxiiska," ayaa lagu yiri bayaanka. Giraffe wuxuu ku darayaa qiimeyaal muhiim ah qaybta dalxiiska iyada oo ah taqasus sare oo soo jiidata dalxiisayaasha caalamiga ah.
Tirada Giraffe ee ku nool Tansaaniya ayaa hoos u dhacday 30-kii sano ee la soo dhaafay iyada oo loo aaneynayo howlaha bani'aadamka inta badan ugaarsiga sharci darrada ah, luminta deegaannada ka sii kordhaya howlaha aadanaha iyo cudurada.
Giraffe, oo ah xayawaanka ugu dheer adduunka ayaa lagu daray xayawaannada adduunka ee wajahaya halista badan oo ay ka mid yihiin cudurrada, ”Dr Julius Keyyu, baaraha Tansaaniya ee baaraha.
Waxa uu sheegay in cudurada hada ku dhaca geeriyada ay yihiin Cudurka Dhegaha ee Giraffe iyo Cudurka Maqaarka Giraffe oo laga soo sheegay koonfurta Tanzaaniya ee caanka ah Mikumi iyo Ruaha National Parks.
Ku soo xadgudubka deegaannada duurjoogta ayaa horseed u noqotay xawaareynta luminta dhulal kala duwan oo loogu talagalay xayawaanka duurjoogta ah iyada oo loo hanjabayo ciribtirka geeriga sababtoo ah luminta deegaannada dabiiciga ah.
Qorshaha Waxqabadka Ilaalinta Geriga ayaa loogu talagalay inuu hago hirgelinta howlaha maxalliga ah iyo kuwa qaran ee lagu ilaalinayo geeriga Tansaaniya, oo ka mid ah kuwa ugu dalxiiska badan xayawaanka duurjoogta ah.
Noocyo badan oo hawlo ah ayaa loo baahan yahay, oo ay ku jiraan maareynta ilaalinta, cilmi baarista, waxbarashada iyo wacyigelinta, iyo sharci fulinta iyo istiraatiijiyado kale oo looga hortago ugaarsiga sharci darrada ah.
Baarayaasha waxaay qiyaaseen in inta udhaxeysa 20,000 ilaa 30,000 Gerira laga helo maanta ay kunoolyihiin Tansaaniya, laakiin ay la kulmayaan hanjabaado waa weyn oo horseedi kara dabar go ’.
Tansaaniya ayaa lumisa 400,000 hektar oo kayn ah sanadkiiba iyada oo boqolkiiba 15 laga dhimayo doogga dabiiciga dabiiciga tobankii sano ee la soo dhaafay.
Giraffe waa xayawaan bulsheed ku nool dabacsan, aan-dhuleed ahayn, xayndaab furan oo cabbirkoodu u dhexeeyo shakhsiyaad kooban ilaa in ka badan boqol.
Giraffe waa Xayawaan Qaranka Tansaaniya sidaa darteedna waxaa lagu ilaaliyaa Sharciga Daryeelka Duurjoogta ee lambar 5 ee 2009, oo ka mamnuucaya dadka inay dilaan, dhaawacaan, qabsadaan ama ugaarsadaan geri.
In kasta oo dastuurka Tansaaniya uusan si toos ah ugu xusin inuu yahay xayawaanka qaranka, haddana gerigu waa caan oo waa astaan ​​muhiim u ah Tansaaniya.
Waxaa loo isticmaalay inay calaamado ka ahaato waraaqaha lacagta Tansaaniya ee laga soo saaray xorriyadda 1961 illaa taxanaha 2011.
Ugaarsiga sharci darada ah ee gariga oo ugu horeyn hilib, harag, lafo iyo timo dabada ah ayaa kadhacday Tanzania. Qeybo ka mid ah dalka, dadka reer Tansaaniya sidoo kale waxay u isticmaalaan wax soo saarka geedaha daawo dhaqameedka, gaar ahaan, dhuuxa lafta iyo maskaxda, oo la rumeysan yahay inay daweeyaan HIV / AIDS, cilmi baarayaasha duurjoogta.
Dilalka jidadka weyn ee geedaha ayaa ahaa halista kale ee la soo sheegay inay yareyneyso tirada xayawaankan caanka ah. Ilaa iyo hada ma cadda heerka ay waddo disho qatarta geerida Tansaaniya, laakiin qasaarooyinka waddooyinka ayaa lagu tiriyay aagag kala duwan oo waddooyinka waawayn ay uga gudbaan meelaha ay dagan yihiin.